Zụta S4 (Andarine) ntụ ntụ (401900-40-1) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / SARMS / S4 (Andarine) ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke S4 (Andarine) ntụ ntụ (401900-40-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa akara.
S4 (Andarine) ntụ ntụ isi agwa
aha: S4 (Andarine) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C19H18F3N3O6
Ọbara arọ: 441.36
S4 (Andarine) ntụ ntụ na-eji usoro steroid
S4 ntụ ntụ ma ọ bụ Andarine ntụ ntụ (CAS 401900-40-1).
Raw Andarine ntụ ntụ Usage
A ga-ewere S-4 na 50mg-75mg, ụbọchị 5 n'izu, maka izu 12-16. Dịka e kwuru na mbụ, S-4 adịghị mkpa ka ewere ya na 3 n'oge dị iche iche n'ụbọchị; ma maka ndị na-ahọrọ usoro a, a na-atụ aro otu ntinye 25mg (ihe dịka ọkara otu milliliter) otu ugboro na nri atọ gị atọ.
Akara aro maka ịcha bụ 50 mg maka izu 6-8. Ị ga-eji ya kwa ụbọchị ma were 2 ụbọchị maka oge. Inye Andarine ntụ ntụ kwa ụbọchị maka ogologo oge nke ọnụọgụ abụọ na-ebute mgbanwe n'ọhụụ.
Ịdọ aka ná ntị na S4 (Andarine) ntụ ntụ
S-4 na ọtụtụ SARM ndị ọzọ amarawo na ọ ga-akpata ịda mbà n'obi na obere ndị mmadụ. A chọpụtala nke a dị ka ihe gbasara nsogbu gbasara ahụike. ndị na-eme nnyocha na ụmụ oke ndị na-enwe nsogbu uche ọ bụla kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-eji ọgwụ a eme ihe.
Uru nke S4 mgbe e jiri ya tụnyere Steroid / Prohormones
(1) Nzuzo S4 Powder abụghị nke na-egbu egbu ma ọ nweghị mmetụta ọjọọ na imeju, mgbali elu ma ọ bụ akụkụ ọ bụla ọzọ.
(2) E nweghị usoro ọgwụgwọ zuru oke ma ọ bụ oge mgbake chọrọ (n'ozuzu naanị 2-3 izu).
(3) Ndị na-eme nchọpụta ga-enwe mmetụta dị ukwuu nke ịdị mma karịa na Raw S4 Powder.
(4) Enweghị ihe dị mkpa achọrọ maka oge dị n'etiti oge mgbagwoju anya.
(5) Nzuzo S4 Powder na-enye steroid dị ka nsonaazụ na-enweghị steroid dịka mmetụta dị iche iche.
Andarine Powder Powder (CAS 401900-40-1)
Andarine ntụ ntụ Marketing
Otu esi zụta S4 ntụ ntụ: zụta Andarine ntụ ntụ (CAS 401900-40-1) site na AASraw
AASraw na-enye 98% S4 / Andarine raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ọrụ anabolic ọrụ.
Raw S4 ntụ ntụ ntụziaka:
Zụrụ S4 (Andarine) Ngwá ojii Online | Ihe Ị Chọrọ Ịma
1 nyochaa maka S4 (Andarine) ntụ ntụ
S4 (Andarine) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma